Faritra Menabe, ny 09 aogositra lasa teo. Lehilahy 30 taona no notifirina tamin’ny basim-borona ka maty tsy tra-drano. Rehefa nanao ny fikarohana ny zandary tany an-toerana dia tratra ilay namono olona niaraka tamin'ny basy izay nampiasainy. Ny famotorana natao no nahafantarana fa ady eo amin'ny fianakaviana roa tonta no fototry ny olana. Naka dahalo valo lahy ny fati-dran'ilay maty noho izany ka naka an-keriny olona roa izay fianakavian'ilay namono ny alin'ny 11 hifoha 12 aogositra teo. Rehefa nanao vela-pandrika anefa ny zandary tao Malaimbandy dia tratra ny olona 02 naniraka hanao io fakana an-keriny io ny andron'ny12 aogositra ary voatery naniraka ny namany hamotsotra ireo takalon'aina roa. Voasambotra ihany koa ny tompon'ilay basy izay nampindraminy hanaovana io vono olona io. Efa voasambotra avokoa ireo voakasika noho izany.